नयाँ वाई-फाई मानकले अधिक दायरा र कम खपत प्रदान गर्दछ आईफोन समाचार
नयाँ वाइफाइ मानकले अधिक दायरा र कम खपत प्रदान गर्दछ
जब मसँग कुनै समस्या छ वाइफाइ नेटवर्क र मेरो वरपर कोही छ, म ठट्टा गर्छु कि "जसले वाइफाइको आविष्कार गर्‍यो, उसले आराम गर्यो।" हामी २०१ 2016 मा प्रवेश गरिसकेका छौं, तर प्राय नेटवर्कहरूमा केहि अन्य समस्याहरू छन्, जुन महत्वपूर्ण ड्रप वा गतिमा ड्रपमा अनुवाद गर्दछ। म तपाईंलाई सम्पूर्ण ईमानदारीसाथ बताउन सक्छु कि यो मसँग समय समयमा मबाट पाँच मिटर भन्दा कम हुँदा हुन्छ राउटर र कुनै वस्तु बिना जुन यो र मैले प्रयोग गरेको कुनै पनि उपकरणहरू बीच आउँदछ। यसैले आजको जस्तो समाचार मेरो लागि आशावादी छ र निश्चित रूपमा धेरै प्रयोगकर्ताहरूको लागि।
वाइफाइ एलायन्स अन्ततः अत्यधिक अपेक्षित मानक को मंजूरी छ Wi-Fi 802.11ah, एक मानक जुन "हालो" भनिएको छ। मिल्दो उपकरणहरू ब्यान्डमा अपरेट गर्दछ 900MHz बिना अनुमति बिना, जसको २.2.4GHz मानक भन्दा दुई पटक दायरा छ कम शक्ति प्रयोग गर्दा र अधिक प्रवेश प्रदान गर्ने। पछिल्लो त्यस्तो चीज हो जुन म पहिले आइपुग्न मनपराउँथे, मेरो मामलामा, मैले सम्झौता गरेको /००/6० गतिको फाइदा लिन मेरो घरको कौसीबाट क्याट cable केबल चलाउन सकें।
यो मानक मा कुञ्जी हुनेछ इन्टरनेटको चीज र जडान भएका घरहरू, केहि त्यस्तो चीज अहिलेसम्म पुग्न सकेको छैन जहाँ यो आशा गरिएको थियो। अहिलेसम्म समस्या केहि इलेक्ट्रोनिक उपकरणहरू जस्तै ढोका सेन्सरहरू, जडित लाइट बल्ब वा क्यामेराहरू थिए, जससँग लामो दूरीमा डाटा पठाउन पर्याप्त शक्ति हुनुपर्छ। हालको मापदण्डले ठूलो स्वायत्तताका लागि अनुमति दिँदैन वा हामी चाहन्छौं त्यत्र जानको लागि अनुमति दिदैन, प्रत्येक पर्खालमा गति ड्रपहरू उल्लेख नगर जुन स signal्केत पार गर्नुपर्ने थियो।
वाई-फाई एलायन्स भन्छ कि खाली हुनेछ अवस्थित वाइफाइ प्रोटोकोलसँग उपयुक्त र रुटरहरू जस्ता धेरै उपकरणहरूले परम्परागत २.2.4 र G जीगाहर्ट्ज ब्यान्डमा काम गर्ने छन, जुन सिद्धान्तमा, निकट भविष्यमा नयाँ M ०० मेगाहर्ट्ज-उपयुक्त उपकरणहरूको होस्टको ढोका खोल्ने छ। यी सबैको साथ, प्रश्न यो छ: हामी तिनीहरूलाई कहिले हाम्रो घरमा राख्न सक्दछौं?
लेखको पूर्ण मार्ग: आईफोन समाचार » आईफोन » धेरै » नयाँ वाइफाइ मानकले अधिक दायरा र कम खपत प्रदान गर्दछ
तर तपाइँलाई एक नयाँ राउटर चाहिन्छ कि m ०० मिमि घन्टामा प्रसारण हुन्छ, हैन? र त्यसपछि उपकरणसँग वाइफाइ आह छ। तपाईं भन्नुहुन्छ कि तिनीहरू अवस्थित Wi-Fi सँग उपयुक्त छन्।
नमस्कार, जानानोर। उनीहरू के भन्छन् बाट, यो उही हो, तर बढी शक्तिशाली। के परिवर्तन गर्नुपर्नेछ प्रेषक (राउटर) हुन्।
एसी वाईफाई एक कुल विफलता हो, जब तपाईं 5-- meters मिटर भन्दा टाढा जानुहुन्छ तपाईं हराउनुहुन्छ, जबसम्म तपाईंसँग दुई-ब्यान्ड वाइफाइ हुँदैन र यसले N लाई स्विच गर्दछ। आशा छ यो अन्ततः वाईफाई एएच सँग सुल्झाइनेछ, मैले अझ राम्ररी देखेको छु, अधिक टेक्निकल डाटा नजान्नेमा, तर पक्कै पनि ... हामी भविष्यलाई त्यस्तै देख्नेछौं र कसरी सबै चीजहरू अनुकूलित हुन्छन्, किनकि अपरेटरहरू तपाईं नयाँ प्रयोगकर्ता नभएसम्म भव्य नयाँ राउटर बाहिर आउँदा शुल्क लगाउन चाहनुहुन्छ।
GuillerVks लाई जवाफ दिनुहोस्
बियन्सेको स्टाइलिस्टबाट आएका मादक पदार्थहरूको लागि आईफोन सहायक
फोर्ड आफ्नो गाडीहरूमा CarPlay समर्थन थप्न